Orinasa Jirama : 100 miliara Ariary tsy voaloan’ny mpanjifa -
AccueilSongandinaOrinasa Jirama : 100 miliara Ariary tsy voaloan’ny mpanjifa
31/10/2017 admintriatra Songandina 0
Misedra fatiantoka hatrany ny orinasa Jirama hatramin’izao. Fatiantoka izay ateraky ny tsy fandoavana vidin-jiro avy amin’ny mpanjifa. Vokatra ny tsy fandoavana herinaratra izay indrindra, voalaza fa mahatratra 100 miliara Ariary no tsy voaloan’ny mpanjifa amin’ny orinasa Jirama amin’izao fotoana izao. Manoloana ity tsy fandraisana andraikitra ataon’ny mpanjifa ity anefa, tsy mitazam-potsiny ny orinasa fa misy ny fanapahan-kevitra raisina mifanaraka amin’izany, toa ny fanapahana ny herinaratra ho an’ireo tsy mahaloa izany. Isan’ireo miteraka fatiantoka ho an’ity orinasa ity ihany koa, ny tsy fanarahan-dalàna ataon’ireo mpanjifa sasantsasany eto an-drenivohitra. Ohatra amin’izany ny fisintonana jiro tsy nahazoana alalana, ny fikititahana ny kaontera ahafahana manena ny tarehimarika sy ny sisa. Raha tsiahivina, tokantrano 1804 isa tamin’ireo 4470 no nahatratrarana izany nandritra ny fisavana natao. Ary raha izany fangalarana mihoa-pampana ataon’ny mpanjifa sasantsasany izany, tsy mahagaga raha miaina ao anatin’ny delestazy lavareny ny vahoaka Malagasy satria ny vola tokony hanarenana ny lany sy ny samba dia tsy misy mandoa.
Na dia aza anefa izany, tsy mitsahatra mijery fomba hanatsarana ny kalitao omena ny mpanjifa ny orinasa Jirama. Isan’izany ny, hampifandraisana ny famokarana ny herinaratra any amin’ny faritra manomboka amin’ny taona 2018. Ho fanatsarana ny kalitaon’ny famatsiana herinaratra any amin’ireo tanàn-dehibe maro no anton’izany. Ny riandrano sy ny toby amin’ny alalan’ny solika no ho ampiasaina. Izy io dia tafiditra ao anatin’ny fandaharan’asa fanatsarana ny famokarana amin’ny sehatra ny angovo ataon’ny orinasa Jiro sy rano Malagasy.
Ao anatin’izay fanatsarana izay hatrany, fantatra fa aparitaka amin’ny mpanjifa tsotra ihany koa ny “compteur intelligent” rehefa mahazo izany ireo orinasa lehibe hatramin’ny volana martsa taona 2018, araka ny fanazavana avy amin’ny tale jeneralin’ny Jirama, Jaomihary Aimé Olivier. “Mba ahafahana mampihena ny fahaverezana, ary antsasaky ny ampahatelon’ny vokatra avy amin’ny faritra manomboka amin’ny 2018, ataonay “hybride” daholo, misy “solaire” ny famatsiana ny herinaratra. Ahafahantsika sady manatsara ny tolotra no mampihena ny masonkarenan’ ny vokatra ny Jirama.”
Hita taratra sy azo tsapain-tanana ny fahaiza-mitantan’ny Fitondram-panjakana tarihin’ny Filoha Hery Rajaonarimampianina. Fantatra mantsy fa nankatoavin’ny Filankevi-pitantanan’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI, ny alarobia 11 jolay teo ny tomban’ezaka andiany fahatelo nataon’i Madagasikara mahakasika ny ...Tohiny